Charlotte Brontë mụrụ 200 afọ gara aga | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
A mụrụ Charlotte Brontë afọ 200 gara aga
Berkwụ Alberto | | Emelitere na 21/04/2016 19:16 | ọtụtụ
Na Eprel 21, 1816, onye edemede Charlotte Brontë batara n'ụwa n'echeghị otu iota nke ndụ ya n'ọdịnihu dị ka onye edemede ga-ewetara ya.
Ọnwụ nne ya, nnyefe ya na mba ndị siri ike nke Yorkshire, ma ọ bụ nbanye ya n'ụlọ akwụkwọ ebe ọ ga-arịa ọrịa ụkwara nta bụ ụfọdụ n'ime usoro ndị ga-akpali ọrụ nke otu n'ime ndị ọsụ ụzọ na-ede akwụkwọ nwanyị na, ọkachasị , si Jane Eyre, akwụkwọ akụkọ ya a ma ama.
Nwanne nwanyị nke Agnes na Emily Brontë, onye edemede nke ihe ndị ọzọ dị mkpa gbasara akwụkwọ ịhụnanya dị ka Wuthering Heights, Charlotte Brontë gaara agbanye 200 taa.
Brontë na akaghi aka nke nwanyi
Abụghị m nnụnụ, ọnweghịkwa ọnyà jidere m: Abụ m mmadụ, nwere uche nke aka m
Ntughari site na Jane Eyre abụghị naanị ịkọwapụta ebumnuche nke otu n'ime ụmụ nwanyị na-adọrọ mmasị n'edemede akwụkwọ kama, n'otu ụzọ, ọ gosipụtara akụkụ nke ọhụụ nke nwanyị, Charlotte Brontë, nke zoro n'okpuru aha nwoke n'oge ọ bụ nwanyị na onye edemede bụ echiche abụọ nke mmekọrịta chiri anya.
Amụrụ na 1816 na Thronton, na Yorkshire (Great Britain), Charlotte Brontë nwere ụmụnne ise, ndị ha na ha jikọrọ ọnụ wee belata mkparịta ụka nke ala ịtọgbọrọ n'efu nke ala Bekee site na ịde akụkọ na iche echiche ụwa ndị ọzọ, ọkachasị mgbe ha kwagara n'obodo Haworth .
Mgbe nne ya nwụrụ na 1921, a ga-eziga Charlotte na ụmụnne ya ndị nwanyị na Clergy Daughters, ụlọ akwụkwọ dị na Lancashire ebe ha niile dara ọrịa ụkwara nta. Ọnọdụ ikuku nke ụlọ ahụ ga-abụ ihe mmụọ nsọ maka Jane Eyre's Lowood Center.
Mgbe ụmụnne ha nwanyị abụọ nwụsịrị n'ihi ụkwara nta, Anne, Emily na Charlotte ga-abụ otu "atọ n'ime otu edemede edemede", onye ọ bụla n'ime ha na-ede akwụkwọ akụkọ ha malitere iziga ndị na-ebipụta akụkọ n'okpuru aha nwoke. Onye mbu edeputara bu Jane Eyre (1947), akuko akuko banyere onye mbu site na nwa agbogho emegburu emegbu nke huru onye nwe ulo di omimi nke ala ebe o na aru oru dika onye ochichi, Mazi Rochester.
Akwụkwọ ọgụgụ, nke Smith, Elde & Company bipụtara, ghọrọ ihe ịga nke ọma n’ahịa, na-eme ka ndị na-agụ akwụkwọ chọọ ịmata ihe ndị ha bụ Currer mgbịrịgba, aha njirimara nwoke nke Charlotte ji mee ihe n'oge Victorian anaghị ele ya anya dị ka onye edemede nwanyị.
Mgbe o mechara mee ka ndị mmadụ mara ya, ndị na-anụ ọkụ n'obi na-ekwusi ike banyere akwụkwọ akụkọ ahụ belatara, ọ bụ ezie na akwụkwọ ahụ gara n'ihu ire nke ọma n'afọ ndị sochirinụ, mbipụta ndị ọzọ sochiri ya.
Charlotte, obere enyi nke nnọkọ oriri na ọ ofụ andụ na London, gara n'ihu na-ede akwụkwọ akụkọ ya nke abụọ site na Yorkshire, Shirley (1849), nke a ga-agbaso Villette (1853) ma obu Onye nkuziakwụkwọ akụkọ edere tupu Jane Eyre mana e bipụtara ya na 1857.
Mgbe ọ lụsịrị Arthur Bell Nicholls, onye na-agwọ nna ya, Charlotte nọgidere na-atụrụ ime ruo mgbe Machị 31, 1885, mgbe ọ nwụrụ na nwa ọ na-atụ anya na typhus.
Ihe nketa nke Charlotte Brontë
Eserese ụmụ nwanyị nwanyị Brontë gosipụtara na National Portrait Gallery na London. Site n'aka ekpe gaa n'aka nri: Agnes, Emily na Charlotte.
Jane Eyre bụ otu n’ime ndị kasị akpa akwụkwọ akụkọ na English akwụkwọ, otu ugboro ugboro na ụlọ akwụkwọ sekọndrị na isi iyi nke mmụọ nsọ maka ndị edemede ndị ọzọ dịkọrọ ndụ dị ka Sylvia Plath, n'ihi na na mgbakwunye na ịbụ onye Bekee, Jane Eyre bụ akwụkwọ nwanyị na-esite na "oke ume nke mkpụrụ obi," dịka onye nkatọ kwupụtara a ọnwa ole na ole ka e mesịrị.
N'aka nke ya, ọrụ kacha mkpa Charlotte Brontë emeela ka abụ ndị sitere n'ike mmụọ nsọ, ihe nkiri (nsụgharị kachasị ọhụrụ, nke Mia Wasikowska na Michael Fassbender na-egwu) na ọbụna egwuregwu.
Jiri afọ abụọ nke ọmụmụ ya, National Portrait Gallery dị na London na-egosipụta naanị eserese nke ụmụnne nwanyị Brontë, dị na 1906.
N'aka nke ya, e weghachiri ezinụlọ ochie ezinụlọ dị na Haworth, na West Yorkshire dị ka ebe ngosi ihe mgbe ochie, na-eme njem nlegharị anya nke Brontë Society, nke weghachite ụdị ihe niile dị na ezinụlọ.
Taa bụ afọ 200 nke ọmụmụ Charlotte Brontë, onye okike nke ihe a na-ewere dị ka otu nnukwu ọrụ akwụkwọ akwụkwọ Bekee na akara nke nwanyị na-agụ akwụkwọ na agbanyeghị ọtụtụ ajọ mbunobi nke oge Victorian, ruru narị afọ nke iri abụọ nke ọ ga-egosipụta oke mmetụta ya na omenaala na omenala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » ọtụtụ » A mụrụ Charlotte Brontë afọ 200 gara aga
Ọ dị ka enwere nsogbu na ụbọchị ahụ, ọ bụghị taa kama ọ bụ Julaị 30, e chere na a mụrụ ya n'ụbọchị ahụ mana site na 1818
Zaghachi Víctor M. Valdés Rodda
M na-agbazi n'ihi na ha na-ekwu banyere Charlotte abụghị Emily
"Don Quixote" maka ụmụaka
Ken Follett ga-ede akụkụ nke atọ nke "Ogidi Earthwa" na Seville